एनआरएनए चुनाव : पन्त र आचार्यको प्यानलमा काे-काे ? :: a1nepal.com.np
गैरआवासीय नेपाली संघ अन्तराष्टॅिय समन्वय परिषद (एनआरएनए-आइसिसी) को नवौं अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व चयनका लागि आज काठमाडौंको हायात होटलमा निर्वाचन हुँदैछ । निर्वाचन समितिले नेतृत्वको लागि ४२ जना उम्मेदवारहरुको उमेदवारी परेको जनाएको छ ।
संघले ८० भन्दा बढी मुलुकहरुमा एनआरएनएको राष्ट्रिय समन्वय परिषद स्थापना भएको दावी गरिए पनि ४९ देशबाट आएका झण्डै २६ सय प्रतिनिधिहरुले नयाँ नेतृत्व चयनका लागि मतदानमा भाग लिँदैछन् । निर्वाचन समितिले मतदाताहरुको अन्तिम नामावली पनि आजै प्रकाशित गर्ने जनाएको छ ।
साँझको ५ बजे देखि राति १० सम्म मतदान गर्ने निर्वाचन तालिका रहेको जनाउदै निर्वाचन समितिले मतदान सम्पन्न भएको एक घण्टाभित्रमा नै मतगणना सुरु हुने जनाएको छ । विद्युतीय मतदान भएकाले आज नै सम्पूर्ण नजिता आइपुग्ने बताइएको झ ।
संघको नयाँ नेतृत्वका लागि वर्तमान उपाध्यक्षद्वय कुमार पन्त र कुल आचार्य प्यानलसहित चुनावी मैदानमा छन् । दुई/दुई पटकसम्म उपाध्यक्षमा बनेका जर्मनीका व्यवसायी कुमार पन्तले यसपटक अध्यक्षको दाबी गर्दै उम्मेदवारी दिएका छन् । उनको समूहलाई नेकपा निकटका रुपमा चिनिँदै आएको छ ।यद्यपी केही उम्मेदवारहरु प्रजातान्त्रिक विचारधाराका र केही स्वतन्त्ररुपमा समेत चिनिदै आइरहेका छन् ।
खुल्लातर्फ उपाध्यक्षमा ४ पद रहेकाले श्रेष्ठ र अधिकारीमा कसलाई अघि लैजानेबारे पन्त समूहमा अझै पनि छलफल चलिरहेको कुमार पन्त निकटस्रोतको भनाइ छ । महिला उपाध्यक्षमा पन्त समूहबाट रसिया निवासी सपिलाराज भण्डारीले उम्मेदवारी दिएकी छिन् ।
पन्त समूहले महासचिवमा बेलायत निवासी प्राध्यापक डा. हेमराज शर्मालाई अघि सारेको छ । सचिवमा इजरायल निवासी दिपक प्रसाद ओली र अमेरिका निवासी गौरी जोशीको उमेदवारी परेको छ ।
त्यस्तै बेलायत निवासी व्यवसायी कुल आचार्य आफ्नो टिमसहित चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन् । संघका वर्तमान उपाध्यक्ष रहेका आचार्यले अन्तिम समयमा आएर पन्तलाई टक्कर दिएका हुन् । आचार्यको उम्मेदवारीबारे सुरुका दिनमा हल्लाका रुपमा लिइएको भए पनि अन्ततः उनले निर्वाचनको माहोललाई ह्वात्तै तताएका छन् ।
यस्तै वर्तमान सहकोषाध्यक्ष सोम सापकोटाले आचार्य समूहबाट कोषाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएका छन् ।
ईनास अष्ट्रियाको समुद्घाटन तथा नेपाल पर्यटन प्रवर्धन कार्यक्रम भव्यरूपमा सम्पन्न सन्तोषी भण्डारीको अध्यक्षतामा इनास अष्ट्रिया गठन अमेरिकाको ओहायोमा अन्तरास्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज(अनेसास) गठन हुदै जरो र किलो नेपालमा भएको अन्तराष्ट्रिय शक्ति इजरायल तदर्थ समिति गठन अस्ट्रेलियन नेताद्धारा वुद्ध र सगरमाथाको देश भ्रमण गर्न आग्रह ९ बर्षकै उमेरमा टाइकोण्डोमा ब्ल्याक बेल्ट राष्ट्रिय तामाङ घेदुङ इजरायलको अध्यक्षमा बिमला मोक्तान चयन वलिउड अभिनेता राजपाल यादवलाई ६ महिना जेल सजाय, यस्तो हो मुद्धा जोर्डन गएकी बस्नेत गर्भवती भएर घर फर्किएपछि…… हिन्दु जागरण इजरायलद्वारा गौमाता रक्षार्थ आर्थिक सहयोग
← देउखुरीको भालुवाङ्गमा ट्राफिक सचेतना कार्यक्रम सम्पन्न ।	वाङमय शताब्दी पुरुष संस्कृतिविद् सत्यमोहन जोशी सेलिब्रिटिहरुका बीच सम्मानित →